बोत्सवानामा सयौं हात्तीको रहस्यमय मृत्यु - nepnews
अफ्रिकाको सबैभन्दा धेरै हात्ती पाइने देश बोत्सवानामा हात्तीहरु रहस्यमय तरिकाले मर्न थालेका छन् ।
पछिल्लो दुई महिनामा त्यहाँ ३५० भन्दा बढी हात्ती मरेको बीबीसीले जनाएको छ । गत मे महिना यता ओकावाङ्गो डेल्टा क्षेत्रमा कम्तिमा ३५० हात्तीको रहस्यरुपले मरेको डाक्टर नायाल म्याक्यानले बताएका छन् । डाक्टर म्याक्यान बेलायतस्थित नेशनलपार्क उद्धार सहयोगी संस्थाका प्रतिनिधि हुन् ।
यसबारे स्थानीय संरक्षणकर्मीले गत मे को सुरुमा सरकारलाई जानकारी गराएको डा. नायालले बिबिसीसँग बताएका छन् । लगत्तै डेल्टा क्षेत्रमा हवाई उडान गर्दा तीन घण्टामै १६९ मृत हात्ती फेला परेका थिए । त्यसको एक महिनापछि थप मरेका हात्ती भेटिएका थिए ।
गएको मे मा बोत्सवाना सरकारले हात्ती मर्नुको कारण चोरी शिकार वा तस्करी नरहेको बताएको थियो । मरेका हात्तीका दाह्रा ननिकालिएका कारण यो घटनाको सम्बन्ध तस्करीसँग नरहेको बोत्सवाना सरकारको भनाइ थियो ।
हात्ती मात्रै मरेका छन्, अरु कुनै जनावर नमरेको डा. नायालको भनाइ छ । उनले यो पटकको घटना विषादीका कारण भएको भन्ने कुरामा त्यति विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
गएको वर्ष बोत्सवानामा विषादी प्रयोग गरेर कम्तिमा एक सय हात्ती मारिएका थिए । मरेका हात्तीबाट लिइएको नमूना परीषणको रिपोर्ट आउन अझै केही हप्ता लाग्ने बोत्सवाना सरकारले बनाएको छ । अफ्रिका हात्तीका लागि उपयुक्त बसोबास भएको क्षेत्र हो । अफ्रिकी हात्तीको एक तिहाई संख्या बोत्सवानामा रहेको छ ।
दशैंको सातौं दिन, घरघरमा फुलपाती भित्राइँदै
Nepnews October 5, 2019
Nepnews November 24, 2019
पनौतीमा कर्फ्यू हट्यो
Nepnews March 17, 2020
जर्ज फ्लोइड हत्या प्रकरणः अमेरिकाका विभिन्न सहरमा निषेधाज्ञा
Nepnews May 31, 2020
Nepnews March 4, 2020